PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-11-29 - ‘Unyana wam wagilwa okwenja sisithuthi samapolisa!’
‘Unyana wam wagilwa okwenja sisithuthi samapolisa!’
KAPA: NKALA ixinge etyeni malunga nesizekabani sokugilwa komntwana yiveni yamapolisa eNyanga eKapa.
Usapho lakwaNomntsentse lityhola amapolisa ngokungabi nankathalo ngokungathi agile inja eyabula esithubeni.
Oku kuza emva kokuba inkwenkwana yeli khaya uIminathi Nomntsentse, 8, wagilwa sisithuthi samapolisa ngomhla wamashumi amabini anesithoba kweyeDwarha kulo nyaka.
Ngokwengxelo kukholeleka ukuba umntwana wagilwa sisithuthi samapolisa esecaleni kwendlela nanjengoko wayezama ukunqumla indlela.
“Andizange ndabuthi cwe ubuthongo sukela oko unyana wam wagilwa sisithuthi samapolisa, ukhala ngeentlungu kube nzima ukulala ingakumbi ebusuku,” utshilo uNtombozuko Nomntsentse, 37, ongunina wexhoba.
Le nkosikazi ithi ngomhla wokonzakala konyana wayo
Iyafowunelwa ngabamelwane emsebenzini beyazisa ngengozi ethe yehla. Uthi wafika isitalato iNtlangano eNyanga sigcwele ngabahlali emva kokuva isithonga sokugilwa komntu yimoto, kanti yiveni yamapolisa, nalapho abahlali babevale indlela ngelithi la mapolisa akasayi kukhululeka kwindawo yexhwayelo de umntwana abalekiselwe esibhedlele.
Udiza ukuba inqwelo yezigulana yafika umntwana sele efakwe kwesinye isithuthi ngelizama ukumleqisa esibhedlele, nalapho umntwana kwafunyaniswa ukuba ufumene ukonzakala ngakwiliso lasekhohlo.
Uthi bachitha iintsuku eziliqela umntwana elaliswe kwisibhedlele sabantwana iRed Cross.
Kungokunje le nkosikazi ityhola ngelithi ayizange ifumane sihoyo kumapolisa kuba ayithoba eyenyusa ukuba ivule ityala malunga neengxelo zokugilwa komntwana wakhe sisithuthi samapolisa.
Le nkosikazi idiza ukuba yaxelelwa ukuba lilahlekile idokethi lokuqala, kuza kunyanzeleka ukuba ivule elinye ityala kwakho, nediza ukuba yayingazi oko kwenzeka njani kuba yona yayingekho ngexesha lokugilwa komntwana wayo, yaye amapolisa ayithatha ingxelo kubahlali abathi babona le ngozi.
Uthi kunanamhlanje akazange eve malunga nengxelo yophando lwamapolisa malunga nale ngozi.
“Eyona nto indixhela umphefumlo kukungahoywa lipolisa kanye eli laliqhuba isithuthi, ingathi litshayise inja kanti nenja ixatyisiwe ngumnikazi wayo,” utshilo unkosikazi uNomntsentse.
Uthi oko esehla esenyuka esibhedlele etyatyulwa ziindleko zokulimala kukanyana wakhe. Udiza ukuba akukho nyango lokundandatheka komphefumlo abathe balizuza emva kwale ngozi.
Esitsho kananjalo ukuba unyaka wakhe kungokunje ulala nzima ebusuku zingqaqambo, nalapho athi uyambona ukuba umntwana wakhe oku kwamenzakalisa kangangokuba uhlala enxunguphele.
Isithethi samapolisa eNtshona Koloni, uCaptain Frederick Van Wyk, uthi kuqhutywa uphando malunga nale ngozi, yaye uthi abecuphi bakwinkqubo yokwenza udliwanondlebe namangqina.
“Umphandi kweli tyala uza kuzama amalungiselelo wokuba olu sapho lufumane unyango lwasemphefumlweni.”
Esitsho kananjalo ukuba icandelo eliphanda amapolisa iIPID laziswa malunga nesi siganeko, nadiza ukuba isiganeko esikumila kunje asikho kwimiqathango yezomthetho weIPID.
“Umnqweno wam kukubona ngeliso lenyama ipolisa elagilisa ngesithuthi usana lwam, ingabi ngathi lagila inja” utshilo unina wexhoba.
Uthi ngekungcono ukuba eli polisa laliziphe ithuba lize kubona umonakalo, libonakalise ubuntu, kodwa lona likhethe ukuqhubeka nobomi ngokungathi akukho nto yenzekileyo.
UNomntsentse esitsho kananjalo ukuba umcelimngeni ajamelene nawo akukho mntu ofuna ukunikisa ngobungqina ngokungathi ukho umntu obagrogrisayo kuba uyile kwivenkile ekufuphi enekhamera, nalapho umntwana wakhe wafumana khona ukwenzakala. “Ndacela ukuboniswa ushicilelo lwevideo, kodwa umnini wevenkile ukhaba ngawo omane.